2 Samoela 24 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865] - (2Sam 24)
[Ny nanisana ny olona, sy ny aretim-be nanjo azy tamin'izany] Ary ny fahatezeran'i Jehovah nirehitra indray tamin'ny Isiraely, ka dia nanome saina an'i Davida Izy hanao izay hahatonga loza amin'ny vahoakany hoe: Mandehana, isao ny Isiraely sy ny Joda.
Dia tonga tany Gileada izy, tany amin'ny tamin'i Tatima-hodsy, dia tonga tany Danajana izy, ka nanodidina hatrany Sidona,[Na: tany amin'ny tany lemaka vao azo]
Dia natolotr'i Joaba ny mpanjaka ny isan'ny vahoaka voalamina, ka nisy valo hetsy ny lehilahy mahery nahatan-tsabatra tamin'ny Isiraely, ary dimy hetsy ny lehilahy tamin'ny Joda.[Heb. mpanatsoaka sabatra]
Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Araona: Tsia, fa hovidiko aminao mihitsy araka izay tokom-bidiny ireo; fa tsy hanatitra fanatitra dora na ho an'i Jehovah Andriamanitro amin'izay azoko fotsiny aho. Ka dia novidin'i Davida sekely volafotsy dimam-polo ny famoloana sy ny omby.Ary Davida nanao alitara teo ho an'i Jehovah ka nanatitra fanatitra dorana sy fanati-pihavanana. Ka dia neken'i Jehovah ny fifonana natao ho an'ny tany, ka nitsahatra tsy namely ny Isiraely intsony ilay areti-mandringana.
2 Samoela 24:1
2 Samoela 24:2
2 Samoela 24:3
2 Samoela 24:4
2 Samoela 24:5
2 Samoela 24:6
2 Samoela 24:7
2 Samoela 24:8
2 Samoela 24:9
2 Samoela 24:10
2 Samoela 24:11
2 Samoela 24:12
2 Samoela 24:13
2 Samoela 24:14
2 Samoela 24:15
2 Samoela 24:16
2 Samoela 24:17
2 Samoela 24:18
2 Samoela 24:19
2 Samoela 24:20
2 Samoela 24:21
2 Samoela 24:22
2 Samoela 24:23
2 Samoela 24:24
2 Samoela 24:25